Maitiro ekugadzirisa kusagadzikana kwepfungwa mukati mevaviri | Bezzia
Maitiro ekugadzirisa kusagadzikana kwepfungwa mukati mevaviri
Kugara nemunhu anotambura nedambudziko repfungwa chinhu chakaoma chaizvo, kunyanya kana ari mumwe wako. Hazvisi nyore uye kana iwe usinga zive kutakura kusagadzikana kwakadai, zvinogona kukonzera hukama kuputsa nekufamba kwenguva.
Kuti udzivise vaviri vacho vane zuva rekupera, Izvo zvakakosha kuti vese mapato vade kugadzirisa mamiriro akadaro uye vadzidze kurarama nawo. Tiri kuzokupa yakatevedzana yenhungamiro yekutevera kuitira kuti hukama huve noutano sezvinobvira, kunyangwe kusagadzikana kwepfungwa kweimwe yemapato.
1 Tsigira vaviri vacho
2 Dzidza nezve kusagadzikana kwepfungwa
3 Regai nyanzvi dzishande
4 Kukosha kwerapi
Tsigira vaviri vacho
Hazvisi nyore kuti chero munhu azive kuti ane chirwere chepfungwa, kunyanya kana iwe uri muukama. Mune ino kesi, mumwe munhu anofanira kukuratidza rutsigiro ruzere uye nekukuita iwe kuti uone nguva dzose kuti hausi wega. Kunzwa kuve nenyasha yekuve nerutsigiro uye rudo rweumwe wako zvakakosha kana zvasvika pakukunda kusagadzikana kwepfungwa kwakadai.
Dzidza nezve kusagadzikana kwepfungwa
Kamwe kuongororwa kwechokwadi kwaitwa kuti mudiwa ane chirwere chepfungwa, inguva yekuunganidza ruzivo rwakawanda sezvinobvira pamusoro pechirwere chakadai. Zvakanaka kuenda kune nyanzvi dzinozivikanwa kana mawebhusaiti ayo anobatsira kuziva zvakawanda pamusoro pechirwere chakadai uye nenzira iyi batsira vaviri vacho nenzira yakakodzera.
Regai nyanzvi dzishande
Kuda kudzidza nezvechirwere ichi hakupi munhu iyeye kodzero yekuva murapi wemumwe wavo. Tichifunga izvi, zviri nani kune nyanzvi kuti dziite basa radzo sezvo ivo vachiziva zvavari kuita uye zvinogona kubatsira kurapa kusagadzikana kwakadai. Basa revaviri rinofanirwa kuve rekutsigira mune zvese zvinodiwa uye kuvaratidza rudo pavanenge vachirida.
Zvakanaka kurangarira kuti munhu ari kurwara haakwanise kupa zvese zvaanoita kune mumwe wake. Iye munhu anotambura nedambudziko rakadai anofanira kutora mugove wake uye aite zvese zvinobvira kuti akunde kukurira kusagadzikana uye kuti nenzira iyi hazvikuvadze hukama pachahwo nenzira yakaipa.
Kuenda kurapi kwakakosha zvakanyanya kana zvasvika pakukunda kusagadzikana kwakadai uye kudzivirira chirwere ichi kuti chisapedzisira chakanganisa hukama. Kurairana kwakanaka kunobatsira vaviri vacho kuti vakwanise kudzora manzwiro akasiyanasiyana anomuka nekuda kwekukanganisa kwakadai. Zvakakosha kuona kuti vaviri ava ndivo vane hutano hwakanaka kunyangwe paine matambudziko angamuka nekuda kwekugara nechirwere chepfungwa.
Muchidimbu, hazvisi nyore kugara nemumwe wako uyo akaonekwa aine chirwere chepfungwa. Zvisinei, zvinokwanisika kuva nehukama hwakanaka hunobvumira vanhu vese kusimbisa rudo rwavo uye rudo. Chinhu chakanyanya kukosha kutsigirana uye kutora hanya kurapa kusagadzikana kwepfungwa. Pamwe kuenda kurapi kana nyanzvi, ndiani anoziva kubatsira munhu anorwara kuti akunde matambudziko nekutarisira hukama hwevaviri ava.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Maitiro ekugadzirisa kusagadzikana kwepfungwa mukati mevaviri
Sarudza yakanaka tsoka uye uwane nyaradzo